🥇 ▷ Nokia waxay ka baran doontaa tartanka loogu talagalay mustaqbalka sare ee qiyaasta, xitaa inbadan ✅
Nokia waxay ka baran doontaa tartanka loogu talagalay mustaqbalka sare ee qiyaasta, xitaa inbadan
Sida laga soo xigtay wararkii ugu dambeeyay, qiimaha guud ee wanaagsan ee lacagta Nokia 8 ayaa dhowaan noqon doonta xusuus.
Hal sano iyo badh ka dib dib-u-bilaabida Android, waxaa suurtagal ah in la raadiyo waraaqaha dheelitirka ugu horreeya ee shaqada Nokia. Qalabkeeda waxay leeyihiin dabeecad si cadna loo aqoonsan karaa, ballanqaadka cusbooneysiinta joogtada ah ee softiweerka illaa iyo hadda si aad ah ayaa loo ilaaliyaa xogta iibka ayaa caddeynaysa inay sax tahay. Hal aag, si kastaba ha noqotee, weli ma aysan guuleysan inay iskeed sameyso, taasi waxay ku jirtaa dhamaadka ee suuqa.
Moodooyinka kaliya ee Nokia ee ku faani kara cinwaanka weyn ayaa ah, xilligan, kaliya Nokia 8 iyo Nokia 8 Sirocco, waa laba aalad si kastaba ha noqotee si buuxda uguma qancin dadweynaha iyo ugu yaraan dhan cambaareyn. Iyaga oo lagu xoojinayo guusha qaybaha kale ee suuqa, astaanta Finnishka ah ee taariikhiga ah ayaa qorshaynaysa in ay wax ka qabato mustaqbalka dhow, iyada oo doonaysa in ay muujiso in ay leedahay bartay khaladaadkooda iyo tartankii caanka ahaa.
AKHRISO: Nokia rasmi ah 6.1 Plus
Nokia 9 – mise waxaan ugu yeernaa Nokia 10? – sidaas awgeed ugu dambeyntii wax yar bay ka qabaan inay ka masayraan kuwa la tartamaya xagga tayada, iyagoo bixinaya khibrad dusha sare wareega. Tani, si kastaba ha noqotee, marka loo eego wararka xanta ah ee ku wareegaya deegaannada ku dhow dhow Nokia, waxay sidoo kale ku soo bixi karaan a hagaajinta qiimaha. Nokia 8 ugu yaraan waxay ku guuleysatay inay ka mid noqoto kuwa ugu sarreeya liiska qiimeynta ugu macquulsan, halka cidda ku guuleysata ay u dhowaan karto. Lacag dhan 1000 euro. Ma ahan warar xiisa badan, laakiin waxaan hubnaa in waxqabadka ugu sareeya run ahaantii ay si dhakhso leh noogu raaxeysan karaan, markaa waxay noqon doontaa tan qiimaha wadada inteeda kale samee.
Via: Telefon ArenaXigasho: NokiaMob